ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ယူတော့ ယူချင်သား
ယူတော့ ယူချင်သား ဒါပေမယ့် ရန်အောင် သီချင်းထဲကလို ဒီငရုပ်သီးလေးစားမိသလို ရင်ထဲပူပြီးတကယ်စပ်မှာလည်း ကြောက်တယ် ။ အမေကတော့ ပြောသား မိဘတွေမရှိတော့ရင် ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုပဲ ကောင်းတယ်တဲ့ ။ ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်ပါတယ် တူ /တူမတွေ ဆိုတာကလည်း ကိုယ်ရှာနေတုန်း ပေးနိုင်နေတုန်းတော့ ကောင်းမှာပေါ့ ကိုယ်က အသက်တွေကြီင်္းလား ဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲ ကဂျီကချောင်များတဲ့ လူပြိုကြီးဆိုရင်တော့ ဒီလူကြီး ဂန့်ကို မဂန့်နိုင်ဘူးလို့ သူတို့စိတ်ထဲများတွေးမိသွားရင် ငရဲတွေကြီးကုန်ကြပါအုံးမယ် ။ အိမ်ထောင်ပြု ခလေးမွေး ကိုယ့်ရင်သွေးလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ရင်းနဲ့ပဲ ဘ၀ရဲ့ မောပန်းခြင်းတွေကို ဖြေသိမ့်ဖို့က အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ ။ ဒီလမ်းကို သိရက်နဲ့ ဘာကြောင့်မလျှောက်ဖြစ်တာပါလိမ့် အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မြင်ရတွေ့ရတာ စိတ်မချမ်းသာစရာပဲ ကွဲတဲ့သူ ခလေး ၂ယောက်လောက်နဲ့ စီးပွားရေး အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ ။ အဲ့တာကြောင့် အဲ့လမ်းကိုမလျှောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့း) လျှောက်ချင်ပေမယ့် ခု ချိန်ထိ လမ်းမဖောက်ရသေးလို့။
လမ်းဖောက်ဖို့ကလည်း ဘော်လီစာကြီးလည်းမရှိ လူငှားနဲ့လည်း အဆင်မပြေ တော်ကြာ သူ့ပါသာသူဖောက် သူ့ပါသာသူ လျှောက်သွားမှ ပလန်လက် ပက်လန်တွေ လန်ကုန်အုံးမယ် ။ တကယ်တော့ ကိုယ့်အခြေနေကလည်း မိန်းမတစ်ယောက် ယုံကြည် နိုင်လောက်တဲ့ အနေထားမရှိသေးတာလည်း အမှန်ပါ ။ ပိန်ညှောင်ညှောင် ပျော့စိစိ ကျနော့်လိုကောင်မျိုးကို ဘယ်သမီးရှင်ကမှလည်း ဒီကောင် ဘာကြောမှမတင်းဘူးလို့ တွေးမိကြမှာ အမှန်ပါပဲ ။ မိဘနောက်ခံကလည်း အငယ်ဆူုံးသားလေးမို့ သမီးရှင်တွေ ကိုစိန်တစ်ဆင်စာ ငွေ ၇ အိတ် ( ကြွတ်ကြွတ်အိတ် ) နဲ့ တင်တောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူုး ဆိုတော့ အင်း..... တော်ပါပြီ အမေရာ ကျနော့်ပါသာ အေးဆေးနေမယ်လို့ ခပ်တင်းတင်းလေးနဲ့ ပြောလိုက်တယ်း) စိတ်ထဲကတော့ အင်း မိန်းမတော့ ယူအုံးမှလို့ ။အသွင်တူ မတူဆိုတာကတော့ သိပါဘူး ကျနော် ညစ်ပတ်တိုင်း သူလိုက်ညစ်ပတ်ရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးလေ အိပ်ရေးကြီးတိုင်းသာ သူလည်း အိပ်ရေးကြီးရင် ဒီလင်းမယား အားတိုင်းအိပ်နေတယ်ဆိုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က 90 ဒီဂရီလောက်စောင်းပြီး မြင်ကြမှာကလည်း မလွဲဧကန်ပေါ့ ။
မျှစ်ကြိုက်တတ်တဲ့ သူနဲ့ ဗိုက်အောက်တတ်တဲ့ ကျနော်ကလည်းမဖြစ်သေး ။ ငါးပိကြိုက်တတ်တဲ့ကျနော်နဲ့ အနံ့ဆိုးဆိုးတွေရရင် ခေါင်းမူးတတ်တဲ့ သူက ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်း ။ ပိန်တဲ့ ကျနော်နဲ့ ၀ချင်လာတဲ့သူ ခင်ဗျား ထမင်းလျှော့စားတော့ ၀ရင် မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောတိုင်း ထမင်းများများစားစမ်းပါ7ရက် ထမင်းမစားရတဲ့ ဒီလိုဗလမျိုးနဲ့ ဘယ်လိုများ အားကိုးရမလဲလို့ ပြန်ချေပမှာကတော့ ကျိန်းသေပါပဲ ။တစ်ယောက်စိတ်ဆိုးတိုင်း ဘယ်သူက အရင်စချော့ရမလဲဆိုတာ မသိတာချင်းလည်း တူတယ် ။ အဖြူရောင်ကြိုက်တာချင်း တူသလို ကော်ဖီကြိုက်တာချင်းလည်းတူတယ် ခလေးလိုချင်တာချင်း လည်းတူပေမယ့် တစ်ယောက်ပဲ လိုချင်တဲ့သူနဲ့ အမွှာပူး လိုချင်တဲ့ကျနော် ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိတဲ့ မုန့်ဆီကြော်ကို နှုတ်ခမ်းသပ်နေတဲ့ ကြောင်အိုကြီးအဖြစ်နဲ့ တူနေသလိုပဲး) ။အိမ်ထောင်ပြုဖို့ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ လမ်းတံတားတွေဆောက်သလိုမျိုးပေါ့ ရေရှည်စီမံကိန်းပါ ။ တည်မြဲတယ်ဆိုတာ မတည်မြဲခြင်းတစ်ခုတည်းရှိတာမို့ ဘယ်အရာကိုမှ အချစ်တွေ အနှစ်တွေဆိုတာကိုလည်း ပုံသေမတွက်ထားတော့ပါဘူး အိမ်ထောင်တော့ပြုမယ် တူတာတွေမတူတာတွေ နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေးပေါ့ ဒီလို ညှိညှိရင်း နောက်ဆုံးတော့ လုံးပါးပါးသွားကြမှာပါပဲ ။ နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ ချစ်ခြင်းတွေ တူဖို့ပါပဲလေ ဟုတ်တယ်မှတ်လား ။
ပြောမယ့်သာ ပြောရတာ ကျနော့်ရဲ့ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းက ကိုလင်းဒီပ ရဲ့ ညစာစားပွဲ ကဗျာထဲကလို ““သုံးဆယ်ကျော်မှာ ကျွန်တော်တို့က ဘဝကို နည်းနည်း ရိပ်မိလာသလိုပဲ ”” အင်း အဲ့လိုရိပ်မလို့ အခြေနေမဟန်ဘူး အမြန်ယူမှလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တော့ ကျနော်လည်း ၃၀ ကျော် သူလည်း ခေါင်းတွေဖြူလောက်ပြီး ။ ဟဲလေး သီချင်းထဲက စာသားအဆိုင်းဆိုရင်တော့ ဘာဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ် ဆံပင်တွေဖြူလည်းပဲ ချစ်တယ် ဆံပင်တွေမရှိလည်းပဲချစ်တယ် ။
တကယ်တော့ဒီပို့စ်က အိမ်ထောင်ရှင် ဘလော့ဂါများအတွက်သာ ရေးဖို့ကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးပါ အစ်မသက်ဝေ စလိုက်တဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို အရမ်း(အရမ်း) ခင်ရတဲ့ အစ်မကြီးစန်ဒါက ကြောင်ကလေး ရေ ရေးပေးပါဆိုလို့ ၀ မရှိပဲ ၀ိ လုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား ကျေးဇူးပါ အစ်မကြီးရေ ၀ိ လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက် :P ။
ဝ လေး ရှိလာတဲ့ အခါကျရင် တခါ ထပ်တက်ဂ်မယ် မောင်မျိုးရေ....
အဲ့ကျ တခါ ထပ်ရေးပေးနော်...း))
လူပျိုကြီးများ သိပ်တွေးတာပဲ... မတွေးနဲ့ ယူသာယူပစ်.. .ဟားဟား...
လမ်းဖောက်ဖို့ကလည်း ဘော်လီစာကြီးလည်းမရှိ ဆိုတာထဲက..
စာဖတ်ပြီးတော့ ရယ်နေရတယ်း)))))))))))))
သူများ ရွေးကျတွေပဲ ရနေဦးမယ်.. အဟိ :D
ဝ မရှိပဲ ထ လုပ်ပလိုက်တယ်ပေါ့....။
ဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုရင် ယူမယ့်ဟာ မြန်မြန်သာယူပါ..။ စဉ်းစားနေရင် ဟင်းစားထဲ ပါသွားမယ်။ စောစောယူထားရင် စောစော အဖတ်တင်တယ်။ မြှောက်ပေးတာမဟုတ်..အတည်...။
ကြွားချင်လျက်လက်လာတို့ပြီး တဂ်တဲ့..မစန်ဒါကြီးကို ကျေးဇူးတင်လိုက်စမ်းဘာာာာာာာ :P
လူပျိုကြီး ရဲ့ ဒုက္ခပေါ့
ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ ကျွန်တော်တို.အရပ်က ဘလော့ဂါ အပျိုကြီး ရဲ့ အဖြစ်မျိုးနဲ.တူနေမလားမသိဖူး
ရှေးခေတ်က အပျိုကြီးတွေက ရွေးရင်းရွေးရင်း အရွယ်လွန်သွားတော့ သနပ်ခါးသွေးရင်း ရတာယူမယ် ၊ ရတာယူမယ်ပေါ့ ၊ လူတိုင်းသိပြီးမို. အသေးစိတ်မရေးတော့ပါဘူး ၊
ကျွန်တော်ရေးချင်တာက modern ဘလော့ဂါ အပျိုကြီးတွေကတော့ အရွယ်လွန်သွားတော့ သနပ်ခါး မသွေးတော့ဖူး ၊ ကျောက်ပြင်နဲ. သနပ်ခါးအစား ကွန်ပြူတာ keyboard မှာ လက်တင်ပြီး မစွံတော့ ဒေါသထွက်ထွက်နဲ. ဖတ်သူရှိ မရှိ ရိုက်တယ်၊ ရိုက်တယ်ဆိုပြီး စာတွေ ရိုက်နေတော့တာပဲ ၊ ရိုက်တယ်- ရတာယူမယ်ဆိုပြီး ပို.စ်တွေတင်တော့တာပဲ ငါးဟင်းချက်နည်းတွေ ၊ ကိုးရီးယား မင်းသားသေတဲ့ အကြောင်းတွေ ဟုတ်မဟုတ် ရေးနေတော့တာပဲ
မောင်မျိုးက အသက် ၃၀ ကျော်လား ၊ အသက် ၃၀ ကျော်ဆိုတာ ၃၉ နှစ်အထိ အကျုံးဝင်တယ်နော် ၊ ယောကျာင်္း အသက် ၃၀ ကျော်ဆိုတာ သိပ်ဟိုင်းတယ်လို. မဆိုနိုင်ပါဘူး ၊
ကျွန်တော်တို.အရပ်က အပျိုကြီးလည်း မြန်မြန်စွံပါစေ
မောင်မျိုးရေ.. တခါတလေ အရမ်းစဉ်းစားလွန်းရင်လည်း မကောင်းဘူး မောင်လေးရေ.. တော်ကြာနေ ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား.. ဖူးစာဆိုတာ ဦးရာလူပါဆိုတာလေ.. နောက်ကားတွေ ကျော်မတက်ခင် ခပ်သွက်သွက်လေး လုပ်ထားနော်.. အဲဒီအခါကျရင် အမတို့လည်း မမေ့နဲ့.. ဖိတ်စာပို့ဖို့ :)))
ငရုတ်သီးဟာ မစပ်ပါဘူး စားသာ စားကြည့်လိုက်ပါ ...း)